တွေးမိတွေးရာ စိတ်မကောင်းစရာ (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » တွေးမိတွေးရာ စိတ်မကောင်းစရာ (၂)
တွေးမိတွေးရာ စိတ်မကောင်းစရာ (၂)
Posted by ရွှေဘိုသား on Jan 17, 2012 in My Dear Diary | 8 comments
အခုတလောတွေ့နေရတာကလည်း စိတ်မကောင်းစရာ ၀မ်းနည်းစရာတွေပဲ
အရင်တစ်ခါတင်ထားတဲ့ တွေးမိတွေးရာ စိတ်မကောင်းစရာ ဆိုတဲ့ပို့စ်လေး
ထဲမှာပါတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်လေးမှာပဲ 15 ရက်နေ့ကပေါ့ဗျာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပြီးနောက်2ရက်အကြာပေါ့
ဆိုင်ထဲက ဘေးတစ်ခုံခြားမှာ ထိုင်နေတဲ့ အစ်မတစ်ယောက် အသက်က 25 လောက်ပေါ့ အွန်လိုင်းမှာ သူ့ရည်းစားနဲ့ ဂျီတော့ ပြောနေတာ သူ့ရည်းစားဆိုတာကလည်း
သူတို့ပြောဆိုနေတဲ့ စကားတွေကိုကြားပြီး သိရတာပါ
အစကတော့ သိပ်ဂရုမစိုက်သေးပါဘူး နောက်ပိုင်းတော့ ဟိုဘက်ကလည်း နိုင်ငံခြားမှာနေတာဆိုတော့
အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်တဲ့ အကြောင်းကိုမေး တယ်ထင်ပါတယ် ဟုတ်တယ် လွှတ်ပေးတယ်လို့ ဒီဘက်ကပြန်ဖြေသံလည်းကြားရတယ်ဗျာ
အဲဒီတုန်းကတော့ စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်သေးတယ်ဗျာ နိုင်ငံခြားမှာသာ စီးပွားရှာနေရတာ ကိုယ့်နိုင်ငံလေးလွမ်းတော့လည်း
ကိုယ်နိုင်ငံမှာစီးပွားပြန်ရှာချင်တာကြောင့် နိုင်ငံတိုးတက်မဲ့ ကိစ္စကို စိတ်ဝင်တစားရှိကြသေးတော့ ချီးကျူးမိပါသေးတယ်
နောက်တော့ဒီဘက်အစ်မ ဖြေလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် ကျနော်အပါအ၀င်ဘေးနားကအန်ကယ်ရော သူ့ဆီ အကြည့်ကရောက်သွားတယ်ဗျာ
သူပြန်ဖြေတာက အဲဒါတွေက ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး ကိုယ်တွေအကြောင်းပဲကိုယ်ပြောရအောင်တဲ့
ဟိုဘက်ကမေးတဲ့ မေးခွန်းက မင်းဘယ်ပါတီကို မေးပေးမလဲလို့မေးလိုက်တာဆိုတာ သူဖြေတာကိုကြည့်ပြီး သိရတာပါ
သူဖြေတာကလည်း ဘယ်ပါတီပဲမဲပေးပေးပါ သူတို့ဖာသာ သူတို့လုပ်နေကြတာ
ကိုယ့်ရှိမှ ကိုယ်စားရမှာ အချိန်ကုန်တယ်
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပဲပြောပါ အစ်ကိုရာ တဲ့ ဆိုင်ထဲကလူတော်တော် များများ သူ့ဆီအကြည့်ရောက်သွားကြတယ်
သူကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ပါဘူး ရှေ့က ကွန်ပျူတာကိုပဲ အာရုံရောက်နေတာပါ
သူ့ကိုကြည့်နေတဲ့ တခြားသူတွေတော့ စိတ်ထဲဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူး
ကိုယ်နိုင်ငံအရေး ကိုယ်တွေမှ စိတ်မ၀င်စားရင် ဘယ်သူက စိတ်ဝင်စားမှာလည်း
နိုင်ငံက အခုမှ ပြောင်းလဲမဲ့ ရောင်ခြည်သန်းခါစ ရှိသေးတယ် တစ်ချို့က စိတ်မ၀င်စားကြဘူး ကိုယ့်ရှိမှ ကိုယ်စားရမှာဆိုတဲ့
ငတေမာတဲ့ စိတ်တွေမထားသင့်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ် ဘာပဲပြောပြော နိုင်ငံတော်ကြီးကို ပြောင်းလဲချင်တယ် လူတိုင်းလိုချင်တဲ့
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီး လိုချင်ရင်တော့ နိုင်ငံသားတိုင်း နိုင်ငံကြီးသားစိတ်မွေးရမှာပဲလို့ ကျနော်ကတော့ထင်တယ်ဗျာ ဘာပဲပြောပြော
အထက်လူကြီးတွေကတော့ နည်းနည်းချင်း ပြောင်းလဲနေပြီလို့ ထင်ပါတယ် ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အတတ်နိုင်ဆုံး
စိတ်ဓာတ်လေးတွေကအစ ပြောင်းလဲဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ ထင်ပါတယ် မဟုတ်တဲ့နေရာမှာပဲ မာန်မာနတွေထားမနေသင့်တော့ပါဘူး
နိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စကို မလုပ်ချင်လို့ရင်တော့ရပါ့မယ် မသိချင်လို့တော့မရပါဘူးလို့ထင်ပါတယ် ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့သာ ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုရင်
တော့ ရွာထဲက ဦးကြောင်ပြောပြောနေသလို(ဦးကြောင်တောင်းပန်တယ်နော် နံမည်မပြောပဲယူသုံးမိလို့ ပြောပုံလေးကိုသဘောကျလို့ပါ)
လခွီး မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်
အင်တာနက်ဆိုင်ထဲက ဂျီတော့ ပြောနေတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ပြောတာကိုကြားမိပြီး စဉ်းစားမိတာကို ရေးမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်
နိုင်ငံရေးကို သိလွန်းလို့တတ်လွန်းလို့မဟုတ်ပါ ကျနော်ထင်တာကို ရေးချင်းသာဖြစ်ပါသည်
small-cat ရေ ကိုရွှေဘိုသားပြောပြတဲ့လူမျိုးတွေ ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတာနေ့စဉ်ပဲဗျာ… တကယ်စိတ်မကောင်းစရာ… “ရထားလမ်း”ကို ဂျာနယ်တွေကတဆင့်ဖြန့်သင့်ပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ပြီး ဒီနေရာကနေ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်…
အဲဒီလိုလူတွေအများကြီးပါ။ ဒီလိုအရွယ်ကိုသင်လို့တော့ဘယ်လိုမှသိလာနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောင်မှ သူ့ဟာသူသိချင်လဲသိလာနိုင်တော့မှာပါ။ အရေးကြီးတာ အခုအရေးတကြီးလုပ်ရမှာက ကျောင်းတွေ မှာ၊ နောင်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေကိုမိဘဆွေမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ဒီအသိညဏ်ပေးနိုင်ဖို့ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
နိုင်ငံရေးဗဟုသုတ နဲ့ အမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်အောင် မူလတန်းအရွယ်ကတဲကစပြီး ပညာပေးနိုင်မှသာနောင်တချိန်မှာခုလိုအဖြစ်တွေမဖြစ်နိုင်တော့မှာလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေမှစလို့မိမိလက်လှမ်းမှီရာကလေးများကိုဒီလိုဗဟုသုတများနားလည်အောင် သင်ပြပေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒီအချိန်ဆိုဗီဇရှိရင် သူ့ဟာသူပေါ်လာသင့်ပါပြီ သင်ပေးဖို့တောင်လိုမယ်မထင်တော့ပါဘူး
အင်း ကျနော်ကလည်း အဲလိုမတွေးမိဘူးဗျာ အ ပါ့နော် ကိုယ်မှာလည်း မရှိတော့ မခံစားတတ်ဘူး
ကြုံတုန်း ကြော်ငြာဝင်ထားတာ ရှာပေးအုံးနော် ကိုရင်မောင်
နောက်တခါလာရင် အဲဒီအမျိုးသမီးသုံးနေတဲ့ စက်ထဲ ဗိုင်းရပ်စ်ထည့် ကိုက်ပစ်လိုက်ကွာ…။ ပြောနေကြာတယ် ငါ ကိုက်ချင်လာပြီ ခွီး..ဂရား..။
မပြောချင်တာ မသိလို့ ..
မသိတာက မသိချင်လို့ …
မသိချင်တာက အသိပေးမယ့်လူမရှိလို့ ………
……. မွှန်နေတဲ့အချိန် …. ကျန်တာမေ့ပြီပေါ့ကွယ်